हस्तमैथुनमा केटा कि केटी अगाडि ? सर्वेक्षणले देखायो यस्तो – aajnepal
HomeRochakहस्तमैथुनमा केटा कि केटी अगाडि ? सर्वेक्षणले देखायो यस्तो
हस्तमैथुनमा केटा कि केटी अगाडि ? सर्वेक्षणले देखायो यस्तो
एजेन्सी । हस्तमैथुन किशोरावस्थामा हुने आम यौन व्यवहार हो । यद्धपी कतिपयमा यो व्यवहार पाको उमेरसम्म रहने गर्दछ । आफ्नो यौन उत्तेजना शान्त पार्ने सशक्त, सुरक्षीत र गतिलो माध्यम भएकोले अधिकांश महिला तथा पुरुषले यो व्यवहार रोज्ने गर्दछन्।
त्यसो त सन्तुलित हस्तमैथुनले शारीरिक तथा मानसिक फाईदा हुने बताइन्छ । तर लत बसिसकेका कतिपयले हस्तमैथुनकार्यमा सिमा नाघेर सहभागी हुनेगर्छन । यसले स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पार्ने विज्ञहरुको दावी छ । पुरुष तथा महिला दुबैले आफ्नो यौनांङ चलाएर हस्तमैथुनको स्वाद लिने गर्छन् । तर अत्यधिक हस्तमैथुनमा लिप्त हुने महिलाहरुमा शारीरिक समस्या हुने बताइन्छ।
जीवन साथीसंगको सम्वन्ध : जो महिला अत्यधिक हस्तमैथुन गर्छन् उनीहरुको वैवाहिक जीवनमा नकारात्मक हुन् सक्छ । अर्थात श्रीमानसँगको सम्वन्धमा दरार उत्पन्न हुनसक्छ । किनभने हस्तमैथुनको लतमा फसेका महिलाले विहेपछि पनि पतिसंगको यौन सम्वन्धमा रोमान्स गर्न रुचाउँदैनन्।
छटपटी बढ्छ : हस्तमैथुन गर्ने बानी परेका महिलाहरुमा तनाव तथा चिडचिडाहट बढछ । यस्ता महिलाहरुले यदि कुनै कारणबस हस्तमैथुन गर्न नपाए छटपटी बढछ।
हिमेच्युरिया हुनसक्छ : हस्तमैथुन गर्ने महिलाहरुलाई हिमेच्युरिया नामको विरामी हुनसक्छन् । यस्तो विरामी महिलाहरुमा पिसावबाट रगत आउन सक्छ।
महिनावारीमा गडबढी देखिन सक्छ : नियमित हस्तमैथुन गर्ने महिलामा महिनावारीमा गडबढी हुनसक्छ । गुप्ताङ्गमा सुखापन हुनसक्छ । त्यस कारण हस्तमैथुन गरेका बेला सावधानी अपनाउनुनै पर्छ।
सेक्स पावर तुरुन्तै बढाउने घरेलु औषधि, यस्तो छ विधि !